June 11, 2018 – Gasy Egypte
June 11, 2018 Mihaja Rasoanaivo
“Ity lahatsoratra ity no tanteraka dia nohon'ny fanampian'ireo malagasy toa ahy, toa anao ary Silamo eto Egypta izay nanazava misimisy kokoa ny finoan'izy ireo. Tsara koa ny manamarika fa izao dia natao hitomboan'ny fahalalan'ny tsirairay ary hizaran'izany amin'ny hafa fa tsy sanatria akory hitarika ho amin'ilay finoana satria safidin’ny tsirairay manokan’izany. (Texte informatif pour votre culture générale)” Tsara ho resahina izy ity nohon'ny antony maro samihafa mandalo ao an-tsain'ny be sy ny maro fa raha amin'ny ankapobeny dia mbola maro ny malagasy no mihevitra fa ny silamo dia 'ry zareo…
Les Chroniques de Mihaja, Politique, Vaovao28 Comments
“Manana olana sy tsy fifanarahana goavana nandritry ny taona maro hatramin’izao I Egypta sy Ethiopia nohon’ny reniranon’I Neily (le fleuve du Nil, tsy haiko aloha na marina ilay dikan-teny). Raha misavorovoro ny mpanao politika Malagasy nohon’ny ady seza, dia ny firenena sasany kosa dia ny miady mba hametrahana lova tsara ho an’ireo taranaka.” Mety mampanontany tena izao hoe: inona moa no tokony hampisy savorovoro amin’ny resaka rano? Tsy azo adino anefa fa ny rano no fototry ny aina: ny fiainana andavan’andro, ny fambolena sy mamelona ireo zava-maniry, ary azo ananganana…
Les Chroniques de Mihaja, News Diplomatiques, Politique, Vaovao13 Comments